Switzerland oo qaadaneysa 1,600 oo qaxooti ah oo Shan Dal ka imaanaya Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka CaalamkaSwitzerland oo qaadaneysa 1,600 oo qaxooti ah oo Shan Dal ka imaanaya
Switzerland oo qaadaneysa 1,600 oo qaxooti ah oo Shan Dal ka imaanaya
May 27, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 7
Dowlada Switzerland ayaa ku dhawaaqday inay qaadeyso ilaa 1,600 oo qaxooti ah ilaa dhamaadka sanadka 2023. Ka faa’iideystayaasha badankood waa dadka ka cararaya colaadaha iyo cadaadiska ka socda shan dal oo kala duwan.
Iyada oo qayb ka ah qorshaheeda dib u dejinta ayay dowladda Switzerland sheegtay inay qaabileyso ilaa 1,600 oo qaxooti ah, oo inta badan ka yimaadda aagagga xasaradaha, illaa iyo dhamaadka 2023. Go’aanka waxaa ku dhawaaqay 19-kii Maajo golaha federaalka ee Switzerland .
Qaxootiga waa Dadka ka cararaya iskahorimaadyada millatari ee socda ama cadaadiska ka socda Bariga Dhexe iyo waddada Bartamaha Mediterranean, ayaa lagu yiri bayaan.
Mas’uuliyiinta Switzerland waxay yiraahdeen sababo la taaban karo iyo si loo hubiyo wax ku oolnimada, barnaamijku wuxuu ka xulan doonaa dadka ugu badnaan shan dal oo martigeliyeyaal bilow ah ah. Liiska wadamada weli lama shaacin. Kaliya cutub yar oo 10% ah ayaa loo qoondeyn doonaa qaxootiga ka cararaya xaaladaha aan caadiga ahayn ee wadamada kale.
Shuruudaha xulashada waxaa ka mid ah haysashada aqoonsi qaxooti oo ay aqoonsan tahay Hay’adda Qaxootiga Sare ee Qaramada Midoobay (UNHCR), baahida loo qabo badbaadin ee waddanka ugu horreeya ee soo dhoweynta uu ku guuldareysto inuu bixiyo, iyo rabitaanka qaxootiga ee ku biirista Switzerland. Kuwa la xushay waxay mari doonaan dib u eegis qoto dheer oo xagga amniga ah, ayay dowladdu ku dhawaaqday.
Maaddaama dhibaatada caafimaadka bulshada ay dib u dhigtay dib-u-dejinta qaxootiga, barnaamijku wuxuu siinayaa 300 meelood oo dheeri ah oo lagu daro kuwa aan awoodin inay u guuraan Switzerland sanadkii hore, sababo la xiriira cudurka faafa ee COVID-19.
Laga soo bilaabo 2019, Golaha Federaalka ee Switzerland wuxuu soo saaray qoondada gelitaanka ee qaxootiga ah 1,500-2,000, labadii sanaba mar.
Abdi Rahman Mohammed Ali says:
Iwish to win
Abdi shakur adem says:
Maxamuud yuusuf xasan says:
I’m refugee, thank you for your effort you make us.
Mukhtaar cabxi wahaab says:
Waxaan ku noolalahay soomaalia gaar ahaan burco dhipaatooyin badan ayaa nala soo daristy sida colaado iyo dagaalo waxba kama noolin hana loongargaaro
Abdi kaarim says: